रक्तदानमा प्यूठानकै नमुना बने श्रेष्ठ — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचार, शिक्षा → रक्तदानमा प्यूठानकै नमुना बने श्रेष्ठ
रक्तदानमा प्यूठानकै नमुना बने श्रेष्ठ
April 9, 2016४८३ पटक
राधिका भुसाल चैत्र २७ प्यूठान,
रक्तदान गर्दा शरिर कमजोर हुन्छ, आफ्नो शरिरमा रगत कमी हुन्छ, आत्मबल घट्छ भन्ने अन्धविश्वास भम्रलाई चिर्दै १८ पटक रक्तदान सेवा गरी नमुना बनेका छन् प्यू.न.पा. ४ विजुवारका प्रल्हाद भक्त श्रेष्ठ ।
करीब १३ वर्ष पहिले जिल्ला शिविर आएको समयमा उनले एक जना डाक्टरलाई भटेर आफु मोटाउन के गर्नु पर्छ ? भन्ने प्रश्न गरेपछी डाक्टरले नियमित रक्तदान गर्नु पर्छ भनेसंगै श्रेष्ठले आफु मोटाउने रहर पुरा गर्न रक्तदान गर्न शुरु गरेको बताउछन् । उनी भन्छन् “शुरु शुरुमा त बुबा आमाले गाली गर्नु हुन्थ्यो तर पनि मैले रक्तदान गर्न छोडेन लुकी छिपी रक्तदान गरिरहेको थिँए । मेरो मोटाउने रहर पुरा गर्न रक्तदान गरेको थिए तर अहिले धेरैका छोरी बुहारी, छोरा ज्वाइ बुबा आमाले नयाँ जीवन पाएका रहेछन् । यसैले नै मलाई झनै पे्ररणा मिल्दै गयो मैले कसैको जीवन रक्षा गर्न सफल भएछु भनेर खुशी लाग्छ । मानव सेवा नै धर्म हो भन्ने ठानेको छु । अहिले ति नयाँ जीवन पाएका व्यक्तिहरु आएर मेरो बुबा आमालाई थ्याङ्स गर्छन र आर्शिबाद माग्छन् योबेला बुबा आमाको खुशीको सिमानै छैन । रक्तदान सम्बन्धी एकदमै सकारात्मक शिक्षा मेरो परिवारले दिने गर्छन् ।”
श्रेष्ठले रक्तदान गर्दा कहिल्यै आफुले रगत दिदैं गरेको व्यक्ति को हुन भन्ने हेर्न चाँहदैन विरामी नचिनेको राम्रो मान्ने उनको सोंच रहेको बताउछन् । प्रत्येक ३–३ महिनामा १ पिन्ट रक्तदान गर्दै आएका छन् । जिल्ला बाहिर गएर पनि रक्तदान गर्न सफल भएका उनी पेशाको हिसावले यातायात हुन् र त्यो संगै चाउमीन उद्योग पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
। रगतको निश्चित आयु हुन्छ निरन्तर रुपमा शरिरमा रगत उत्पादन हुने र नष्ट हुन क्रम चलिरहन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको शरिरमा बढि भएको रगत दान गरेर कुनै व्यक्तिले पुर्नजन्म पाउछ भने त्यो भन्दा ठुलो पूण्य अरु के नै हुन सक्छर…….. उनी भन्छन् । रक्तदान गर्दा कमजोर भइन्छ भन्ने मासिकता र संकोचबाट मुक्त भएमा जो सुकैले पनि रक्तदान गर्न सक्छ । रक्तदान गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिनु मात्र नभई आफ्नो शरिरलाई स्वथ्य बनाउने पनि प्रमुख कुरा हो । नियमित रक्तदान गर्दा स्वास्थ्य जाँच पनि नियमित हुनेहुंदा आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ ।
डाक्टरको एक्लो प्रयासले मात्र विरामीलाई बचाउन नसकिने र आफु जस्ता रक्तदाताहरुको ठुलो भुमिका रहेको बताउने श्रेष्ठले आफ्नो जीवनकाल भर नियमित रक्तदान गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।
ब्लड बैकं नभइरहेको अवस्थामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्यूठान शाखाले प्यूठान अस्पताल संग समन्वय गरी अस्पताल परिसर भित्र आकस्मिक रक्तसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । अस्पतालले दिने शल्यक्रिया सेवामा बृद्धिभए संगै रगतको खपतमा पनि बृद्धि भएको छ । गएका वर्षहरुमा वर्षभरीमा औषत २४ पिन्ट रगत खपत हुंदै आएकोमा हालका महिनाहरुमा २४ देखि ३० पिन्ट सम्म रगत खपत हुदंै आएको छ । अवका आउदा दिनहरुमा आकस्मिक रक्तसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित गरी ब्लड बैंकको रुपमा सेवा सुचारु गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको छ । यस तर्फ जिल्ला स्थित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ । प्रत्येक मानिसहरुमा रक्तदान गर्ने भावनाको विकास गर्नका लागि सवै क्षेत्रबाट अभिप्रेरणा जागृत हुनु पर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्यूठान शाखाका सभापति गुमान राज पुलामीले बताए । अधिवेशनमा
स्मरण रहोस् निज श्रेष्ठ २०७२ फागुन ३० गते सम्पन्न ३० औं जिल्ला सभाको अधिवेशनमा उतकृष्ट रक्तदाताको रुपमा न.ेरे.सा.े प्यूठान शाखाबाट सम्मानित भएका थिए ।